Mitadiava hevitra hampiasana indray ireo siny fitaratra lehibe | Bezzia
Susana Garcia | 01/05/2021 10:00 | Nohavaozina amin'ny 29/04/2021 21:00 | an-trano
El fanodinana mavitrika sy mamorona dia iray amin'ireo zavatra tsara indrindra izay azontsika atao mba hahatonga ny fiainantsika haharitra kely kokoa isan'andro. Isan'andro dia mampiasa siny fitaratra amin'ny sakafo maro toy ny jam na legume isika. Ireo kapoaka ireo dia azo atsipy ao anaty fitoeram-panodinana fa afaka mampiasa ihany koa isika sasany hanamboarana zava-baovao, izay fomba hafa fanodinana izay manome fiainana lava kokoa ho an'ilay vera koa.
Izany no antony andehanantsika anio jereo ny fomba fampiasana indray ny siny fitaratra, fototra tsotra be izay ananantsika rehetra ao an-trano ary ahafahantsika manao zavatra lehibe. Tadiavo ary angony ireo siny fitaratra rehetra izay narianao hatrizay ary miomàna hampiasa azy ireo indray amin'ny zavatra samihafa. Ho hitanao fa misy izao tontolo izao hahitana.
1 Siny fitaratra fitehirizana zava-manitra
2 Mamboly zava-manitra ao anaty vilaninao
3 Ampiasao ho toy ny tuppers ny siny
4 Mamorona jiro mahavariana
5 Siny fitaratra fitehirizana entana
Siny fitaratra fitehirizana zava-manitra
Ny hevitra tsara raha te hitahiry zavatra maromaro ianao dia ny manangona siny fitaratra misy habe na endrika mitovy aminy. Amin'ity fomba ity dia ho mora kokoa amin'ny zava-drehetra ny mampifangaro sy mijery tsara. Afaka manao izany koa ianao mividy fonony mitovy na mandoko azy ireo amin'ny loko iray ihany. Mora ny mahita marika amin'ny zavatra isan-karazany toy ny kafe, zava-manitra, na mofomamy, saingy misy ihany koa ny marika toy ny solaitrabe izay azonao soratana avy eo ary misy zavatra maro kokoa. Fomba tsara hampiasana indray ireo kapoaka ary tsy hividianana ny hafa hitahiry ireo karazan-javatra ireo. Fomba iray handaniana kely kokoa.
Mamboly zava-manitra ao anaty vilaninao
Ny zava-manitra kely dia azo ambolena amin'ny toerana kely. Ka marina fa afaka mampiasa ireto sambo ireto hamboly isika ny sasany toa persily kely na oregano ohatra. Ny fambolena an'io karazan-javatra io dia manampy antsika tsy hividy be loatra ary tsapanay koa fa mahaliana ny manao ny zavatrao toy ny zava-manitra mora karakaraina sy karakaraina. Amin'ity fomba ity dia hanana persily vaovao tanteraka ao an-dakozia ianao ary tsy mampiasa vola be loatra.
Ampiasao ho toy ny tuppers ny siny
Fomba hafa hiverenana ny fampiasana ireny siny fitaratra kely ireny dia ny mitondra tsakitsaky maraina na antoandro. Marina fa afaka milanja bebe kokoa ny siny, saingy mahasalama kokoa ny vera raha hanafana ny sakafo amin'ny microwave isika na hampiasa indray. Amin'ireo siny ireo dia azonao atao ny mitondra salady kely na sakafo kely isan'andro hihinana any am-piasana na any amin'izay ianaranao. Amin'izany no ahafahanao mampiasa azy ireo imbetsaka.
Mamorona jiro mahavariana
Ny siny fitaratra indray dia sombin-javatra azo atao ampiasaina amin'ny haingon-trano ho antsika. Amin'ity tranga ity dia azontsika atao ny mampiasa ny siny fitaratra ho toy ny jiro amin'ny jiro indostrialy. Betsaka ny jiro manana ny takamoa eny amin'ny habakabaka fa azontsika atao ny mampiasa ny kapoaka hita taratra hazavana bebe kokoa ary manome azy io hikasika hafa, indostrialy sy tany am-boalohany mbola. Fiovana sarotra hatao nefa azo antoka fa ho jiro tena mahazendana izy io.
Siny fitaratra fitehirizana entana
Ireo kapoaka ireo dia tsara amin'ny fandaminana zavatra ao an-trano. Ankoatr'izay dia mety amin'ny lakozia izy ireo, ka maro ny olona mampiasa azy ireo ao an-dakozia handaminana zavatra toy ny cutlery. Azonao atao ampio tag mba hanananao ny zava-drehetra ao amin'ny tranokalanao ary ampiasao vilany isaky ny toerana. Fomba mora hitazomana azy ireo ho akaiky izany rehefa ilaintsika izy ireo. Azontsika atao ny mampiasa ny be mpampiasa indrindra eo akaikin'ny sambo. Hevitra tena tsotra izy io nefa mety ho tena tsara raha toa ka misafidy siny fitaratra tsara tarehy izay azo voaravaka lamba na tady isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » an-trano » Hevitra hampiasa indray ny siny fitaratra